Online Marg | भारतसँगको हारपछि निराश बनेका नेपाली फुटबल समर्थकहरुलाई सरप्राइज, कहिल्यै नेपाल नआउने भनेका अब्दुल्लाह एकरातमै युटर्न !
भारतसँगको हारपछि निराश बनेका नेपाली फुटबल समर्थकहरुलाई सरप्राइज, कहिल्यै नेपाल नआउने भनेका अब्दुल्लाह एकरातमै युटर्न !
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले नेपाल फर्किने वा नफर्किने भन्नेबारे निश्चित नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको प्रतिक्रियाले भारतसँगको हारपछि निराश बनेका नेपाली फुटबल समर्थकलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपाललाई ऐतिहासिकरुपमा साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलसम्म पुर्याएका अब्दुल्लाले यसअघि फाइनल नै आफ्नो अन्तिम खेल हुने बताएका थिए ।
‘कम्तिमा पनि एक–दुई हप्ता आराम गरेर के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्छु’ उनले भने, ‘भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले पनि के के गर्छ । नेपाली समर्थकका लागि एउटा ठूलो सरप्राइज हुनसक्छ ।’ तर त्यसका लागि समर्थकले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाली समर्थकले आफूलाई समर्थन र एकदमै माया गरेकाले आफूले सधैं नेपाललाई माया गरिरहने उनको भनाई थियो । ‘उनीहरुले सबै राम्रा कुरा दिए । यदि त्यहाँ केही खराब मान्छे पनि छन् भने पनि सबै खराब छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालीले मलाई दिएको माया हो । जब मलाई कसैले समर्थन गरेका थिएनन् । उनीहरुले समर्थन गरे । म सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’